Ihe mgbochi Hoygan maka blọọgụ | Site na Linux
Ihe mgbochi Hoygan maka blọọgụ
Ọtụtụ mmadụ na-ezute ajụjụ ọhụụ ọhụụ na ntanetị ịntanetị na-ekwu pel dị ka:
HOYGAN KOMO INTALO ER MEZENLL AT UVUNTO ME HURJE MUXO MI KOREO EZ LOQUEZEA@JOTMEYL.COM ANTEBRASO FATS
A na-akpọ asụsụ a Hoygan na eziokwu bụ na ị nwere ike ịchị ndị a ọchị ruo nwa oge, mana na ngwụcha Hoygan gwụrụ.
Ọfọn, na enweghị m ike ikwere na ha emeela edemede nke na-egbochi okwu na hoygan na-ahapụ ọkwa dị ka nke a:
Ntuziaka nwụnye bụ ndị a:
Nzọụkwụ 1. Budata faịlụ antiHOYGAN.js ma detuo ya na sava weebụ.
Nzọụkwụ 2. Tinye antiHOYGAN.js n'ime "isi" nke ihu HTML peeji nke nwere ụdị ijikwa.
Nzọụkwụ 3. Chọta ụdị dị na peeji HTML ma gụnye oku ọrụ filterHOYGAN na "onclick" nke "nyefere" Gbaa mbọ hụ na oke ọrụ dabara na "aha" nke ntinye ederede iji nyochaa (nke akara na-acha uhie uhie na ihe atụ a).
Isi: enweghị m ike ịkwenye
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ihe mgbochi Hoygan maka blọọgụ
Na otu hoygan amaghi ka esi eme xd
mana otu ihe dika Cesar Bruto maara
Kedu njikere ị na-ekwu maka ya, anaghị m ahụ ya, lelee post.
N’ezie, ezigaghị blog a
na ihe niile maka ikwu okwu m kwuru ,,,
lelee faịlụ js, echekwara m na ụfọdụ okwu ezughi, Ama m ma ọ bụrụ na ị kọwaara m ,,,
ma ọ bụghị na anyị ga-ebuba faịlụ ahụ ihe dịka 2 mb nwere njikọ nwere ike hahahaha xD
Hahahaha, okwu di nfe ma enweghi ike inyocha ya xD
A naghị etinye ya
Ka anyị lee, otu ihe doro anya.
Emebeghị m edemede ahụ ma ọlị ma enweghị m ike itinye ya
Hahahaha na-aga n'ihu Obi ike mejuputa ya na blọgụ ahụ ka ndị Hoygan niile hapụ ebe a xD
HOYGAN EBE AKA M GA-ACH DRTA Kaadị ekworo maka kọmpụta m
[/ ọnọdụ ule]
PEROSSSTO bụ mmetụta nke ihe ọjọọ ihe ọ bụla. YEBO UN HAÑO ARM GR GRASIAS NA ZUS HARTICULOS Adịghị m KIERO K KITE ISKIERDO IKE. GW MER ME M azịza m na KORREO ELESTRONIZO. kOURAJE 'B A AJERJ MU njọ. [/ ọzọ mode ule]
Ọ bụ asụsụ e ji mara enweghi mkpụrụ edemede pere mpe, jiri h n'ọnọdụ ndị ọzọ (ubieran, hoygan) na iji k kama c. A na-eji ya naanị maka ịjụ ajụjụ nzuzu, na-agagharị ma na-akparịta ụka.
Na blog a echere m na ọ gaghị adị mkpa, ahụbeghị m ozi nke ụdị ahụ ...
[ọnọdụ troll na]
Lol ugbua kwesiri ya! xD
Hoygan enweghị ike ịbanye IRC ...
Hoygans, Hoygans n'ebe nile ...
Jaa nnọọ posts
Zaghachi Mamuel Villacorta
Da na-adọrọ mmasị, ka anyị hụ ka o si arụ ọrụ.
Otu esi eji bọtịnụ dochie menu Firefox